जाँगर भए सुन यही फल्छ ! - Everest Dainik - News from Nepal
जाँगर भए सुन यही फल्छ !
तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका–७ मा तरकारी लगाउँदै उत्पादन गर्दै गरेकी कृषक । जाँगर भए सुन फल्ने माटो यही भएको जानकारी गराउँदै उनले तरकारी खेतीबाट वार्षिक रु पाँच लाख कमाई गर्नै गरेको बताउँछन् ।
तस्बिर : प्रकाश धौलाकोटी, तेह्रथुम
याे पनि पढ्नुस महिला कृषकले अकबरे खुर्सानी बेचेर कमाए २२ लाख
ट्याग्स: terhathum district